Mdy ခရီးအမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » Mdy ခရီးအမှတ်တရ	16
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 7, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography, Travel | 16 comments
ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ မန်းလေးကငယ်သူငယ်ချင်းတွေအတင်းခေါ်လို့ မန်းလေးကအလယ်တန်းကျောင်းဆရာဟောင်းကြီးများ ကန်တော့ပွဲကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…
၅တန်း၊ ၆တန်း လောက်ကတည်းက အတူကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော် မတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းများကို တွေ့ချင်တာလည်းပါပါတယ်။
ူငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ကြတော့လည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မနည်းကြည့်ပြီး ငယ်ရုပ်ဖမ်းယူရတယ်…ရီလည်းရီရပါရဲ့…
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စစ်ကိုင်းတောင်က ဆွမ်းဦးပုညရှင်၊ ကောင်းမှုတော်တို့လျောက်လည်ပြီး ကြုံရာဆိုင်မှာစားကြသောက်ကြပေါ့..
အပြန်ကျ ထုံးစံအတိုင်း ဦးပိန်ရောက်……ဦးပိန်မှာလည်းပိတ်ရက်မို့ လူအပြည့်…ဒါကြောင့်တံတားပေါ်တောင်မတက်ဖြစ်ပဲ
နောက်နေ့မနက်ပိုင်းတော့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာဆရာကန်တော့ပွဲပေါ့…ကျုပ်တို့နေခဲ့တုန်းကတော့ တပ်တွင်းတွဲဖက်အလကပေါ့
ငယ်ဆရာတစ်ယောက်က ဆို ကျုပ်ကိုခွေးမသား..ခုထိသောက်တလွဲလုပ်တုန်းဆိုပြီးပြုံးပြုံးကြီးပြောတော့
၇၊ ၁၊ ၂၀၁၆
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဥပဒိရုပ်က ကောင်းလို့ မှားတာလို့ပြောလိုက် မိုက်မိုက်။
Mike says: ဟုတ်တယ်နော်ကေဇီ..ဟီဟိ..မြန်မာစာဆရာဆဲတာချစ်ဖို့ကောင်းချက်…နောက်ကျုပ်တို့ကိုလည်းမှတ်မိနေတာအံ့သြမိတယ်….
kai says: တံတားတိုင်တွေကို.. ကျွန်းပင်တွေနဲ့ ပြန်မဖြည့်နိုင်တောင်… သံတွေကူသင့်တယ်…။
ဘိုးတော်တယောက်ယောက်က.. တံတားပေါ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ရင်.. အိမ်ထောင်သစ် အနှစ်၂၀ သေချာတယ်..ဘာညာလုပ်လိုက်ပြီး.. တိုးရစ်တွေရိုက်စားလုပ်လည်း.. ၀င်ငွေကောင်းမှာပဲ..။
တွေးကြည့်တာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: နောက်လ ပုဂံအမေတို့နဲ့ သွားမှာ..
အောက်ဆုံးပုံအလယ်က ဦးကျော်ဟိန်းနဲ့တူတာ ဘယ်သူများပါလိမ့်….
alinsett says: ဦးပိန်တံတား ပုံလေးတွေ…အတော် ကြိုက်မိတယ်…ဗျို့… မန်းလေးဘက်လည်း ခြေဦးမလှည့်မိတာ ကြာပြီမို့…လွမ်းမိသား…
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ဟာ..
အောင် မိုးသူ says: မန်းလေးသို့ တစ်ခေါက် ရောက်ချင်သေးသည်
ဦးဦးပါလေရာ says: မနာလိုဘူး… ကိုမိုက်ရေ..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တိုင်တွေ တော်တော်ကို ဆွေးနေတာပဲနော်။ ယိုင်သွားနိုင်မလား မသိ။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကန့်လန့်တွေ..တစောင်းတွေ..သစ်တိုသစ်စတွေနဲ့ရိုက်ထားပိုးထားတာတော့တွေ့တယ်…
.ပညာရှင်တွေပါတဲ့ စံနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမဲ့အဖွဲ့ ရှိ မရှိတော့မသိ..ရှိပုံမရ
ဦးကြောင်ကြီး says: အီနော့်အကြောင်းဂေါ ကြွားခဲ့သေးလား ပါပါမိုက်… ကံထူးလိုက်တာလို့ ဝိုင်းပေါဂျမှာ ပဲနော်စ်။။။ ငှါကွ….
Myat Pearl Phyu says: မန်းလေးအလွမ်းပြေ လာရောက်ကြည့်ရှုသွားပါတယ်ရှင့်..။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သိုင်းကျူးပါရှင့်…အဲခမျ
uncle gyi says: လူပုံကလဲဆရာပုံပေါက်နေတာကိုး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုမိုက်လာ ကျနော်က မရှိ
Ma Ei says: မန္တလေး မရောက်တာကြာပြီထင့်
တစ်ခေါက်တော့ အရောက်သွားပါဦးမယ် သွားချင်တဲ့ နေရာတွေကလဲ အများသား